डा.केसी पक्राउको विरोधमा को–को उत्रिए सडकमा ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २५ पुस– सर्वोच्च अदालतको अवहेलना (मानहानी) गरेको अभियोगमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा मंगलबार काठमाडौंमा बिरोध भएको छ । काठमाडौंको माइतीघरमा भेला भएका केसीका समर्थकहरुले उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन थापा, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रसहित करिव ५ सय हाराहारीमा सर्वसाधारणहरु केसीको पक्राउको बिरोधमा उत्रिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै सोमबारदेखि अनसन थालेका केसीलाई मंगलवार विहान ९ बजे सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । अदालतमा केसीको बयान लिन शुरु गरिएको छ ।